Shax laga sameeyay xiddigaha ugu shidan ee suuqa lagala wareegay xagaagan 2019 – Gool FM
Shax laga sameeyay xiddigaha ugu shidan ee suuqa lagala wareegay xagaagan 2019
(Yurub) 04 Luulyo 2019. Waxaa la shaaciyey shax laga sameeyey 11-ka ciyaaryahan ee ugu shidan ee suuqa kala iibsiga lagala wareegay illaa iyo hadda xagaagan 2019.
Shaxdan waxaa goosha ugu jia goolhaayihii hore ee kooxda Barcelona Jasper Cillessen, kaasoo 35 milyan oo Euro ugu biiray Valencia.
Afarta dambe ee daafaca waxaa ka soo muuqday Aaron Wan-Bissaka oo Man United kag soo biiray kooxda Crystal Palace, Lucas Hernandez oo Bayern Munich kaga soo biiray Atlético Madrid, Éder Militão iyo Ferland Mendy oo labaduba yimid Real Madrid.
Khadka dhexe waxaa shaxdan ugu jira, laacibka Maanta ku biiray Man City ee Rodri kaasoo 70 milyan oo Euro kaga yimid Atlético Madrid, Frenkie de Jong oo Barcelona kaga soo dhaqaaqay kooxda Ajax iyo Tanguy Ndombele oo ka mid noqday naadiga Tottenham Hotspur.
Halka saddexda ciyaaryahan ee dhanka weerarka ay shaxdan kaga soo muuqday, da’ayarka reer Portugal ee João Félix oo 126 milyan euro xalay ugu biiray Atlético Madrid, Eden Hazard iyo Luka Jović oo labaduba ku biiray Real Madrid.
Hadaba halka hoos ka eeg shaxda oo dhameystiran: